China TS-DQ-100 Double Arm Magetsi Medical Endoscopic Pendant kubva kuFekitori vagadziri uye vanotengesa | Wanyu
TS-DQ-100 inoreva ruoko ruviri rwemagetsi endoscopic pendant. Icho chinhu chakakosha mukuvhiya kweLaparoscopic. Inotyairwa nemagetsi, iri nyore uye nekukurumidza. Kwete chete inogona kuendesa magetsi uye gasi, asi zvakare isa zvimwe zvekurapa zvekushandisa. 100% gadzirisa muhukuru, zvekurapa gasi zvitoro, uye magetsi zvigadziko. Modular dhizaini, inogona kukwidziridzwa mune ramangwana.
1. Kamuri Inoshanda
2. Kamuri Yechimbichimbi
4. Kamuri Yekudzorera
1. Magetsi Anotyairwa Sisitimu
Iine magetsi anotyairwa sisitimu uye ruoko rwakatsanangurwa, zvichave nyore kune zvekurapa zvinhu, kuchengetedza nguva uye nesimba remuviri.
Magetsi Medical Pendant
2. Kaviri Inotenderera Kamuri
Ruviri swivel maoko, kureba kweruoko kunogona kuvezwa uye kunogona kutenderedzwa madhigirii mazana matatu, zvichipa yakawanda nzvimbo yekufamba.
3. Gesi neMagetsi Kuparadzanisa Dhizaini
Zvinoenderana nematanho akasimba epasirese, iyo gasi nzvimbo uye magetsi magetsi zvakagadzirwa zvakasiyana kuona kuti mitsara yekupa gasi uye pombi dzinopa gasi hadzizokanganiswa netsaona kana kudonhedzwa nekuda kwekutenderera kwependende.
4. Chishandiso Tereyi
Iyo yetiyiti yetiyiti inogadzirwa neepamusoro-simba aluminium alloy profiles ine yakanaka yekutakura simba. Kune njanji dzesimbi dzesimbi kumativi ese maviri ekuisa mimwe michina. Kureba kwetireyi kunogona kugadziriswa pazvinenge zvichidikanwa. Iyo tireyi ine inodzivirira yakakomberedza makona.
Ceiling Yakakwira Medical Pendant
5. Zvitoro zveGesi
Ruvara uye chimiro cheiyo gasi interface zvakasiyana kudzivirira kusanganisa kubatana. Kuiswa chisimbiso chechipiri, nyika nhatu (yakavhurika, yakavharwa uye isina kubviswa), yakashandiswa kanopfuura zviuru makumi maviri.
China Chipatara Pendant
Inoshanda inoshanda nharaunda:
Kutenderera kweruoko: 0-350 °
Kutenderera kwependendi: 0-350 °
Kaviri Arm Magetsi Medical Endoscopic Pendant
Okisijeni Gasi Kubuda
VAC Gasi Kubuda
Carbon Dioxide Gasi Kubuda
Stainless Simbi Tswanda
Pashure: QF-JX-300 China ICU Kurapa Yakaparadzanisa Bridge Pendant yeChipatara
Zvadaro: TS-D-100 Kaviri Magetsi Kurapa Gasi Pendant yeOperation Kamuri
TD-Q-100 Imwe Ruoko Magetsi Kuvhiya Endoscopi ...
TS-D-100 Kaviri Magetsi Kurapa Gasi Pendant ...
TD-D-100 Imwe Yemagetsi Kuvhiya Gasi Pendant w ...